Francisco Isco oo qorsheynaya inuusan qeyb ka noqon safarka kooxda Real Madrid… (Maxay tahay sababta?) – Gool FM
Francisco Isco oo qorsheynaya inuusan qeyb ka noqon safarka kooxda Real Madrid… (Maxay tahay sababta?)
(Madrid) 09 Luulyo 2019. Xiddiga khadka dhexe reer Spain ee Francisco Isco ayaa filaya maalmaha yar ee soo aadan inuu aabo u noqdo cannugiisa labaad ay u dhali doonto gacalisadiisa Sara Sálamo.
Sidaas darteed Francisco Isco ayaa lagu soo waramayaa inuu go’aansaday inuusan qeyb ka noqonin liiska xiddigaha kooxdiisa Real Madrid ee u safraya dalka Canada, halkaasoo ay ugu diyaar garoobayaan xili ciyaareedka cusub.
Hadaba Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu xaqiijiyay in Isco uusan qeyb ka noqon doonin liiska xiddigaha u safraya dalka Canada, wuxuuna la joogi doonaa saaxiibtiis Sara Sálamo si ay u sugaan cannugooda cusub ee la filayo inuu dhasho maalmaha soo socda.
Isco ayaa shalay oo Isniin ah ku sugnaa xarunta tababarka ee Valdebebas, si uu u maro baaritaano caafimaad, kahor inta uusan qeyb ka noqonin liiska xiddigaha uu ula safrayo tababare Zinedine Zidane.
Tababarka kooxda Real Madrid ay ugu diyaar garoobeyso xili ciyaareedka cusub ayaa maanta oo Talaado ah bilaabmaya, kahor inta aysan u safrin dalka Mareykanka Khamiista soo socota, halkaasoo kulamad saaxiibtinimo ay ugu diyaar garoobayaan xili ciyaareedka cusub ay kula ciyaari doonaan kooxaha Bayern Munich, Arsenal iyo Atletico Madrid.
Miyuu Paul Pogba ka qeyb qaatay tababarka kooxdiisa Man United ku sameysay Australia?